काठमाडौं । लोकप्रिय नायिका रेखा थापाले रुकुमपश्चिमको घटनाका सन्दर्भमा मुख खोलेकी छन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस लेख्दै प्रश्न गरेकी छन्, ‘राज्यसँग लडनु पर्यो नि, एउटी १७ बर्षकी किशोरीलाई मानसिक र साम...
अभिनेत्री मनिषा कोइराला सुनौली नाका हुँदै नेपाल आइन्
काठमाडौं । चलचित्र अभिनेत्री मनिषा कोइराला आज रुपन्देहीको सीमानाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल प्रवेश गर्नुभएको छ। परिवारका सदस्यसहित बेलहिया नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गर्नुभएपछि उहाँ काठमाडौँ प्रस्थान गर्नुभएको ...
छिमेकीसँग संवादमा बाबुरामको ‘पेड्रो’!
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आउँने गर्छन्। तर, बाबुरामलाई बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा हेर्ने उनका शुभचिन्तक पनि धेरै छन्। नेपालमा भएको १० बर्षे जनय...
असार १ बाट कसरी सुरु हुन्छ पढाइ ? यसो भन्छन् शिक्षामन्त्री (भिडियो)
काठमाडौं । शिक्षामन्त्रालयले असार १ गतेबाट वैकल्पिक माध्यमबाट विद्याथीहरुको रोकिएको पढाई सुरु गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको छ। धेरै ठाँउमा इन्टरनेटको सुविधा नपुगेको त...
सरकारलाई कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको कडा जवाफ, भद्र अवज्ञाको विकल्प छैन
काठमाडौं । सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई कडा जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले सरकारले कर तिराउन गरेको ताकेताप्रति लक्ष्यित गर्दै भन्नुभएको छ,...
उपत्यकामा संक्रमण बढ्दो, ४ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज एकै दिन सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजका चार जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण भेटिएको छ । संक्र...
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्नन गर्नेबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सन्र्दभमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका...
दाङमा मात्रै थप ८ जना सङ्क्रमित, पहिलोपटक प्युठानमा एकजना
शिवु खनाल दाङ । दाङमा थप ८ जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । सङ्क्रमित सबै क्वारेन्टाइनमा बसेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङले जनाएको छ । मंगलवार सङ्क्रमित हुनेहरुमा दाङको बंगलाचुली गा...
छुट्टै दलित प्रहरीको सेल बनाउन निर्देशन
दलित समुदाय माथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मं...
अमेरिकामा पनि जातिय विभेदको घटना घटेको छ : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा सङ्लग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले...
घर–घरमा तुलसीको दल राखेर मनाईयो निर्जला एकादशी
काठमाडैं । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घर–घरमा औषधीय गुणले युक्त बिरुवा तुलसीको दल राखी आज निर्जला एकादशी पर्व मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष जेठ शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीको दल राख्ने गरिन्छ। आज दल राखिएको...
लकडाउनकाबीच कर तिर्न सूचना जारी गरेपछि सरकारको आलोचना
काठमाडौं । सरकारकाले लडकाउनका बीच जेठ २५ गतेभित्र सबै कर तिर्न ताकेता गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। ७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण घरभित्रै थुनिएका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले सूचाना जारी गरेको हो । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले साना, लघु र घरेलु साना उद्यमका लागि १५ लाखसम्मको पुनःकर्जा दिन सकिने प्रावधानसहितको पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७७ ल्याएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यू...
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा यसअघि लिइएको एक साता बढी अवधिका सवारी पासले थपिएको बन्दाबन्दीमा मान्यता पाउने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सार्वजनिक निर्माणकार्य र अत्यावश्यक सेवा प्रदान ग...
रुकुम घटनामा बाहिर आए भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेका छन् : महान्यायाधिवक्ता
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरु भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताउनुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको...
कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । मंगलबार नेपालमा थप २ सय ८८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेको छ। मंगलबार २ सय ८८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ९९ पुगे...
काठमाडाैं । भारतको महाराष्ट्रमा विभिन्न स्थानमा छायांकनका लागि अनुमति दिएको छ । त्यहाँकाे प्रान्तिय सरकारले छायांकन युनिटले सरकारले तोकेको शर्तहरूको पालना गरी सुटिङलाइ निरन्तरता दिन सकिने जनाएकाे छ, राज्यको ...
नारायणकाजीको माग : 'कर्मचारीको भत्ता काटियो, सांसदहरुको पनि खारेज हुनुपर्छ'
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सांसदहरुको भत्ता कटौती हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रे...
लकडाउनको ७१ औं दिन : उपत्यकामा सवारी चाप बढ्यो
काठमाडौं । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारि भएपनि उपत्यकाका मूख्य सडकहरुमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। लामो समय सम्म लकडाउन हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको र मानिसहरु काममा निस्किन थालेपछि...
लकडाउनको विरोधमा जोरपाटीमा प्रदर्शन
काठमाडौं । लकडाउनको विरोधमा जोरपाटीमा व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटीमा मंगलबार व्यवसायीहरु लकडाउनको विकल्प खोज्न माग गर्दे आन्दोलित भएका हुन। मंगलबार बिहान लकडाउनको अव...
काठमाडौं । एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएको सीतापाइलास्थित ‘पुनर्बल प्लस’ नामक सामाजिक संस्थालाई रु ५० हजार मूल्य बराबरको राहत प्रदान गरिएको छ। साउण्ड अफ हिमालय नामक संस्थाल...